Filtrer les éléments par date : dimanche, 17 octobre 2021
dimanche, 17 octobre 2021 20:13
Mpirakiteny Mpanatoa Soratra : Miisa 68 izao izy ireo manerana an'i Madagasikara
Tontosa ny Zoma 15 Oktobra 2021 tetsy amin'ny Lapan'ny Tanàna Analakely – Antananarivo Renivohitra ny fifamindram-pahefana eo amin'ny filoha vaovao sy filoha teo aloha eo anivon'ny fianakaviamben'ny Mpirakiteny Mpanatoa Soratra (Notaires).
Nandray ny toerany ny filoha vaovao, Maitre Andriamanalina Andrianjaka, nandimby an'i Maître Razanadrakoto Rijanirina, ary hiasa mandritra ny roa taona azo havaozina in-dray mandeha.
Miisa 68 izao ny isan'ireo Mpirakiteny Mpanatoa Soratra manerana an'i Madagasikara.
Mandeha ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-44 (Amboasary - Vohidiala) saingy miaiky ny rehetra fa misy ny fahatarana.
Nidina nijery ny fizotry ny asa tany an-toerana ny Minisitry ny Asa vaventy Hatrefindrazana Jerry sy ny Tale jeneraly misahana ny tetikasan'ny Filoham-pirenena Augustin Andriamananoro sy ireo mpiara-miasa aminy, niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Faritra Alaotra Mangoro ny alahady 17 oktobra 2021.
Nanome toromarika ny Minisitra fa tokony ho vitaina araka ny fenitra sy ny kalitao ao anatin'ny fotoana voasoratra ao amin'ny bokin'andraikitra ny asa. Nanome toromarika ny orinasa manao ny lalana ny tenany mba hanampy ireo fitaovana ampiasaina hitsinjovana ireo mpampiasa lalana amin’ny fahavaratra.
Moramanga : Manohitra ny fidangan’ny hetra alaina aminy ireo mpitondra posy
Nitokona ny mpitondra posy tao Moramanga ny Alakamisy 14 oktobra 2021 teo. Nambaran’izy ireo fa midangana izay tsy izy ny hetra alaina amin'izy ireo. Ka mba hanehoan'izy ireo ny tsy fankasitrahany izany hetra mihoapampana izany dia nanao hetsika izy ireo.
Oratsimba (langoustes) miisa 37 no sarona ary nogiazana tao Anjiamangotroka Kaominina ambonivohitra Antalaha ny 14 Oktobra 2021. Fiaraha-miasan’ny sampandraharaham-paritry ny jono sy ny toekarena manga ao SAVA sy Polisim-pirenena any Antalaha no nahazoana ny vokatra.
Mbola mikatona ny fanjonoana oratsimba ao anatin’ny Faritra SAVA ny 01 Oktobra ka hatramin'ny 31 Desambra 2021.
Nomena ny fikambanana KALA sy Orchidée mitaiza zaza sembana sy sahirana ao Antalaha ireo oratsimba taorian’izay.
dimanche, 17 octobre 2021 16:14
Fifanintsanana amboaran’ny CAF : Anio ny lalao hifandonan’ny CFFA Andoharanofotsy amin’ny Interclube Angola
Nanomboka tamin'ny 4ora tolakandro ao amin’ny kianjan’i Barea Mahamasina ny lalao hifandonan’ny CFFA Andoharanofotsy amin’ny Interclube Angola. Fihaonana izay tafiditra amin’ny ampahenina ambin’ny folon-dalana amin’ny fifanintsanana hiadiana amboaran’ny CAF.
« Vonona handresy ny mpilalao malagasy », hoy i Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny CFFA.
Marihina fa 5 000 Ariary ny saram-pidirana amin’ny « gradin », 10 000 Ariary ny “tribune latérale » ary 50 000 Ariary kosa ny “tribune centrale”.
dimanche, 17 octobre 2021 13:09
Kaominina Mantasoa : Mponina miisa 4 000 eo hahazo vaksiny Johnson&Johnson maimaim-poana
Nanomboka ny alakamisy lasa teo ny hetsika fanaovam-baksiny Covid-19 ataon’ny tobim-pahasalamana CSB II ao Mantasoa, izay tohanan’ny Corps de la Paix eto Madagasikara.
Mponina miisa 4 000 eo ho eo avy amin'ny fokontany 11 any Mantasoa no hahazo vaksiny Johnson&Johnson maimaim-poana izay fanomezana avy amin'ny governemanta amerikana.
Ity hetsiky ny Corps de la Paix ity dia niatomboka tamin'ny fiofanana momba ny fikarakarana hetsika fanaovam-baksiny miaro amin’ny Covid-19 sy ny fitantanana ireo toerana fanaovam-baksiny.
Mpanentana ara-pahasalamana miisa 20 sy Filoham-pokontany miisa 11 ary mpiasan'ny Corps de la Paix miisa 32 no nandray anjara tamin’izany.
Hitohy hatramin’ny volana novambra ny fanentanana momba ny fanaovam-baksiny ataon’ny mpiasan'ny Corps de la Paix sy ny mpiasan’ny fahasalamana, sy hamalian’izy ireo izay fanontaniana sy ahiahy momba izany. Hapetraka ihany koa ny ivontoerana fanaovam-baksiny isaky ny Fokontany.
Olana tsy mitsaha-mitombo eto Madagasikara ny fanondranana an-tsokosoko ny harena voajanahary sy ny kolikoly mifandraika amin'izany. Araka ny filazan'ny TRAFFIC dia sokatra maherin'ny 21 000 no tratra teto Madagasikara mandritra ny fikasana hanondrana an-tsokosoko, teo anelanelan'ny taona 2018 sy 2021.
Misy ankehitriny ny tetikasa vaovao maharitra telo taona mitentina 3,4 tapitrisa dolara izay natomboky ny governemanta amerikana amin’ny alalan’ny Sampandraharaha amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID), sy amin'ny anaran'ny vahoaka amerikana, ny 15 oktobra, hamahana ireo olana tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary sy ny kolikoly mifandraika amin'izany.
Ny World Wildlife Fund (WWF) no lohalaharana mitarika ny tetikasan’ny governemanta amerikana Counter Corruption and Wildlife Trafficking (Ady amin’ny kolikoly sy ny fanondranana an-tsokosoko ny harena voajanahary ) izay vatsian’ny USAID vola, ary ahitana mpiara-miombona antoka maro toy TRAFFIC International, Transparency International Initiative Madagascar, ary Alliance Voahary Gasy.
Hiara-miasa akaiky amin'ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny Ministeran'ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana lovainjafy ny tetikasa.
Nasiam-panitarana sy nohavaozin'ny Faritra Analamanga tanteraka ity toeram-pitsangatsanganana ity, izay efa nikatona mihitsy teo aloha.
Maro ny foto-drafitrasa vaovao natsangana sy fialam-boly azo tanterahina ao an-toerana. Anisan'izany ny kianja fanaovana fampisehoana, ny toeram-pisakafoana, ny efitra fandraisam-bahiny, ny kianja filalaovana baolina kitra, ny basket ary ny volley-ball, ny tokontany filalaovana tsipy kanetibe, ny dobo filomanosana. Misy ihany koa ny toeram-pivarotana vokatra sy entana voafantina ary ny kilalao ho an'ny ankizy.
Niverina nisokatra ny sabotsy 16 oktobra 2021 ny Analamanga Park, ho tosika amin'ny fizahantany.
dimanche, 17 octobre 2021 12:41
IST- Antsiranana : Manambana ny hampiato ny fampianarana
Nanao taratasy fampiomanana fampiatoana ny fampianarana ireo mpampianatra ao amin’ny IST-Antsiranana nanomboka ny zoma 15 oktobra 2021.
Antony dia noho ny tsy fahalavorarian’ny fampianarana araka ny tokony ho izy noho ny tsy fahampian'ny fitaovana, vola sy Mpampianatra.
Eo koa ny tsy mbola nahazoan’ny mpampianatra ny « vacations » sy ny ora fanampiny (Heures complémentaires) hatramin’ny 2017-2018. Ary koa ny fifanaraham-piaraha-miasan'ny mpampianatra izay tsy mazava hatramin’izao.
Raha tsy misy ny vahaolana dia hampiato ny fampianarana ao amin’ny IST Antsiranana ireo mpampianatra manomboka ny Alatsinainy 18 oktobra ho avy izao.